SERASERA SY ASA FANAOVAN-GAZETY : Hentitra ny valin-kafatry ny Minisitra Lalatiana
« Tena araka ilay fakan-kevitra natao sy nifanarahana ny votoatin’ireo andinin-dalàna mifehy ny serasera eto Madagasikara. Manana fahefana amin’ny fikitihana izany kosa ireo parlemantera fa tsy izaho Minisitra no nanova izany » 14 octobre 2020
Io raha fehezina tsotra ny valin-kafatra nomen’ny Minisitry ny serasera, Lalatiana Andriatongarivo ho an’ny filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety (Ojm).
Nafampana ny fitsoky ny rivotra teo anivon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny filohan’ny Hofalitry ny mpanao gazety. Azo lazaina ho mihejan-droa ny tady eo amin’ny an-daniny sy ny an-kilany, satria samy manana ny heviny mikasika ilay lalàna vaovao natao hifehy ny serasera eto Madagasikara ny roa tonta. Nilaza ny filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety, Gerard Rakotonirina fa tandindonin-doza ny asa fanaovana-gazety eto Madagasikara, noho ny fikasana hametraka jadona atao amin’ny Minisitera.
Nambarany tamin’izany fa novain’ny Minisitera ny lalàna mikasika ny fanomezana ny karatra maha -matihanina ny mpanao gazety. Nohamafisiny fa tsy nifanarahana velively io fanovana io ary tsy tafiditra tao anatin’ireo fakàn-kevitra isam-paritany natao tamin’ny taona 2019.
Tsy niandry ela fa avy hatrany dia nitondra valin-kafatra mikasika izany ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo. Nandiso tanteraka izany ny tenany ary nambarany fa ny filohan’ny OJM mihitsy aza no nangataka mba tsy hanovana an’io lalàna io rehefa tonga ao anatin’ny filan-kevitry ny Governemanta nandritra ny kabary nataony. « Mahagaga rehefa lany ilay lalàna dia miteny ny filohan’ ny OJM fa tsy nakana ny heviny indray. Somary mahagaga ! Tamin’ ny 5 aogositra 2019 isika tao amin’ ny Carlton dia sady nikabary ny filohan’ ny OJM no nangataka hoe : « ity volavolana rijan-tenin-dalàna ity ramatoa minisitra dia angatahinay anao mba hanaovana fanekena eto anatrehan’ ny besinimaro mba tsy hovaina tahaka ny fitaka izay nahazo antsika tamin’ ny 2016 rehefa tonga any amin’ ny filan-kevitry ny Governemanta, rehefa tonga any amin’ ny filan-kevitry ny minisitra », hoy ny fanazavana noentin-dRamatoa Minisitra. Tenako, hoy izy, dia nanao fanekena ampahibemaso fa tsy hanova na hikitika an’io lalàna io mihitsy. « Izaho tenako no nanao fanekena teo imason’ ny mpanao gazety rehetra tamin’ izay fotoana izay tao amin’ ny Carlton fa raha mbola izaho no eto dia manome toky fa tsy hanova izay zavatra nifanapahantsika nandritra ny fakan-kevitra izay natao sy ireo ventin-kevitra rehetra izay niaraha-nanapaka tany amin’ ny 2014 sy 2015, ilay nesorina tamin’ ny fotoan’ androny tamin’ ny 2016. Tsy novain’ ny filan-kevitry ny Governemanta, tsy novain’ ny filan-kevitry ny Minisitra iny volavolana rijan-tenin-dalàna iny », hoy hatrany izy nanamafy.
Niova teny anivon’ireo fahefana mpanao lalàna
Raha ny fanazavana nomen’ny Minisitra dia teny anivon’ireo rafitra mpanao lalàna, izay manana ny fahefana feno amin’ny fikitihana na fanovana lalàna no nampiova ny andininy sasantsasany tao anatin’ity lalàna mifehy ny serasera ity. Rehefa tonga teny amin’ny Antenimieran-pirenena dia nitondra fanovana ireo solombavambahoaka, fanovana izay heverin’izy ireo fa mifanaraka amin’ny lalàna velona eto amin’ny Firenena. Tahaka izany ihany koa, rehefa lany teny Tsimbazaza dia nandalo fandinihana teo anatrehan’ireo Loholona indray ilay lalàna ary mbola nitondra fanovana ihany koa izy ireo. « Rehefa tonga teny anivon’ ny Antenimieram-pirenena, dia nisy novain’ ny Antenimieram-pirenena. Rehefa tonga teny anivon’ ny Antenimieran-doholona dia nisy novain’ ny Antenimieran-doholona. Marihiko tsara fa fahefan’ ny Parlemanta feno ny mikitika volavolan-dalàna iray satria ry zareo no mpanao lalàna. Teny amin’ ny Antenimieran-doholona no nanovàna ilay andininy mikasika ny fomba fifidianana ny biraon’ny Holafitry ny mpanao gazety vaovao. Tsy izahay tato amin’ ny minisitera ary tsy izahay tao amin’ ny fahefana mpanatanteraka no nikitika izany fa ny Loholona satria fahefany feno izany », hoy ny Minisitra nanamafy.
Tsy tokony hametraka adihevitra
Nohamafisiny fa nanana ny foto-keviny avokoa ireo antenimiera roa tonta ireo tamin’ny fikitihana sy fanovana an’io lalàna mifehy ny serasera io, indrindra fa ny fomba fifidianana sy ny firafitry ny biraon’ny Holafitra io. « Ny fitsinjaram-pahefana dia tokony hametraka fa tokony hanana filoha lefitra, mpanolotsaina isaky ny Faritra ny biraon’ ny Holafitra. Satria ny zava-misy dia iray isaky ny Faritra ny filoha lefitry ny Holafitra dia tsy mahavita ny asany ary tsy mahasahana ny Faritany iray manontolo. Inona moa ny maharatsy izany ? Tsy nanohitra izany koa ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana fa mifanaraka amin’ ny Lalàmpanorenana izany », hoy hatrany ny fanazavana noentin’ny Minisitra. Hentitra ny tenany raha nilaza fa tsy anjaran’ ny filohan’ ny Holafitra ny hametraka adihevitra amin’ izany.
Miriaria eran’ny tanàna sahady ireo lehilahy nahavanon-doza FANAFIHANA MPIVADY TANY BETSIAKA -AMBILOBE (344) 22 octobre 2020 Olona 04 naratra, vola 2 tapitrisa ariary lasan’ireo jiolahy miisa enina AMBILOBE (115) 21 octobre 2020 Tovolahy nisandoka ho mpitandro filaminana sarona ny alarobia teo ANKAZOMANGA (102) 22 octobre 2020 Sarona ireo 12 lahy mpampihorohoro sy mpanao fanafihana IMERINTSIATOSIKA (92) 21 octobre 2020 Nahanjahanjan’ny vahoaka irery ireo parlemantera mpanohitra AMBATONDRAZAKA (81) 26 octobre 2020 Lehilahy tompona “Agence de voyage” nadoboka am-ponja FIVADIHAM-PITOKISANA (64) 22 octobre 2020